Dejan Kulusevski Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
musha Nei Untold Biography Chokwadi
Kune Vateveri veNhabvu, kuverenga nezveBiography yevatambi venhabvu vanowanzo pesvedzera, kukurudzira, uye kukurudzira. Ichi ndicho chikonzero yedu Soccer Untold Biography chokwadi chiripo !!
Nhabvu sezvatinoziva inogona kusazombopera. Kunyangwe maitiro ayo mutambo uno tamba wakashanduka mumakore apfuura, nyaya dzinonakidza dzisingamboregi kuburitsa dzaizotenderera mundangariro dzebhola aficionados yezvizvarwa.
Idzo nyaya dzinowanzo tenderera pamusoro pevatambi, mamaneja uye vanyoro vemitambo inobata, inobata, inobata pfungwa uyezve, chero chirevo chakajeka icho vaverengi, vateereri nevataridzi vanogona kugadzirira kurondedzera manzwiro ehukasha ayo nyaya dzakadai dzinoisa mupfungwa dzadzo.
Lifebogger inopa nyaya dzinobata bata nezvevatambi venhabvu, mamaneja uye vanhu vakuru. Mifananidzo Credits: LB.
Chinhu chakakosha chinoita kuti nyaya dzimutse dziri mukuti hadzitsvedze kupfuura kudakara kwemapuratifomu edhijitari senge Lifebogger iyo inokudzwa mugwaro rekunyora uye rakanaka reunyanzvi hwekunyora nhabvu yakatarisana nezvinyorwa zvehupenyu.
At Lifebogger, tinozvirumbidza isu sehunyanzvi hwedhijitari sosi yechokwadi uye isingataurwe nhabvu ngano idzo inova chikamu chebhuku rinonakidza remitambo ratinozivisa nezve vatambi venhau vezvemitambo uye vane mukurumbira pasi rese.
Lifebogger ndeye imwe-kumira dhijitari sosi yechokwadi yenhabvu nyaya. Mufananidzo Wekodhi: LB.
Muchidimbu, chinyorwa ichi chinovavarira kupa vateereri vedu pfungwa izere yezvatinoita nekuburitsa chokwadi chisina kujairika kana chisina kujairika biography zvinyowani zvevatambi venhabvu, mamaneja uye elite pasi pemisoro ine izvo zvinoita zvekuverenga kwakanaka.
Nei Nyaya Dzevadiki - Mamaneja Enhabvu Asina Kutamba Nyanzvi Nhabvu
Bhora harimbomira kubuda kunze kwekutenda kwakakurumbira uye pfungwa. Imwe yemafungiro akadaro inokarakadza kuti vanhu vasina kumbobvira vatamba nhabvu yehunyanzvi havakwanise - pakuipisisa - kuve mamaneja enhabvu kana - zvakanyanya - kufambisa mushe masimba.
Seizvo zvataurwa pamusoro apa zvaiita sekunge zvave kutanga chokwadi chesainzi, Maurizio Sarri akabuda mumabhurugwa kuti atange basa rake rekurairidza mu1990s aine akadzika League Club AC Sansovino apo Andre Villas-Boas akatanga semutevedzeri wemurairidzi kuPorto kuma 1990s.
Andre Villas-Boas naMaurizio Sarri havana kutamba nhabvu padanho rehunyanzvi vasati vatanga kudzidzira. Mifananidzo Credits: WAGNH.
Nei Untold Biography Chokwadi - Vatambi Vanotamba Vaive Vatya NeManeja
Feuds zvinenge zvisingaite mumitambo yetimu kunyanya nhabvu apo zviito zvevatambi zvinokanganiswa ne "kupisa kwechinguvana". Nepo panhambo nenhambo kumeso kana hutsinye hunhu uhwo vatambi vanoratidzira kupikisa avo vanopikisa hunonzi hunobatika se "hunyanzvi hunoitisa", zvakafanana hazvigone kutaurwa apo nhabvu nhabvu dzinoendesa kupisa kumaneja adzo.
Vateveri veBarcelona vaisazokasira kukanganwa runyararo rurefu pakati peaimbove maneja wechikwata Pep Guardiola uye mberi Zlatan Ibrahimovich nekurondedzerwa kwekupedzisira kuti Guardiola chete akataura kwaari kaviri mumwedzi ye6. Mune rimwe dambudziko rakaomarara, mafani eReal Madrid akapatsanurwa pakati pekutsigira Iker Casillas or Jose Mourinho apo ivo duo vakave nekunyangarika pamusoro peyaidzidziswa nemuteedzeri kuti aive munyengeri naiye muchengeti wechiSpanish.
Zlatan Ibrahimovich naIker Casillas vese vane hurefu hwakaora nevatungamiriri venguva-imwe. Mifananidzo Credits: LB.
Mukuwedzera, havazi vazhinji vanorangarira izvozvo David Beckham's maitiro ekukunda paManchester United akambotungamira iye aimbove murairidzi Alex Furgeson Kick bhutsu pane superstar. Tsoka dzakanyatso rova ​​Beckham pauso, chiitiko chakamurudzira kuenda kwake kuReal Madrid mu2003.
Nei Untold Biography Chokwadi - Vatambi venhabvu Naiwo Akanyanya Tsvuku Makadhi
Mitezo iri muchikamu ichi inotangira kubva mukukutu kuidzivirira vadziviriri vemitambo vanosimbisa pamwe nevatambi vane hunyanzvi vane hukama hwekuita zvechisimba uye vanoratidza hutsinye panguva yekutsamwiswa kudiki. Nekuda kweizvozvo, vane zvinosiririsa zvinotyisa marekodhi ayo akasimbiswa nemakambani emakadhi matsvuku.
Kutanga neakaoma kubata vatetetsi, Sergio Ramos tops chati sezvo iye anonyanya kutumira-offs muLa Liga nhoroondo. Kunyangwe achiri pamudyandigere, Steven Gerrad pakati pevatsigiri vane red-kadhi zvakanyanya vakafamba vachidzika Anfield tangi yekutanga yekugeza.
Steven Gerrard naSergio Ramos vane chinzvimbo chepamusoro mune ruzhinji rwevatambi vanotumira. Mifananidzo Credits: LB.
Kufambisa kumusoro tinayo Diego Costa ane hutsinye maitiro ekutamba haamboregi kumuisa munhamo nematsotsi kwese kwaanoenda. Muchokwadi, anoonekwa setsaona yakamirira kuitika chero nguva yaanoyedza kuwana zvakare kubva kune vanodzivirira.
Nei Untold Biography Chokwadi - Vanotamba Nhabvu Vari Polyglots
Vari kure nokudyara zvakawanda mukudzidzira kugona hunyanzvi hwemitambo inoyevedza, vamwe vatambi vakaita mamwe makiromita kuti vafadze vateveri nekudzidza mutauro wenharaunda dzavanotambira. Kuedza uku hakuna kungoita kuti nhabvu yenhabvu iwedzere kuwanda munharaunda yavo asi yakavaita seanofarira mabasa ekutamba pamudyandigere.
Pasina ado yakawanda, vatambi vanoziva mitauro yakawanda vanosanganisira unovavarira Peter Cech anotsigira akaberekerwa kuCzech vanotaura Spanish, German, French neChirungu. Paari, Henrikh Mkhitaryan anonyatsotaura chiArmenian, Chiputukezi, French, Italian, Russian, English neGerman.
Pakupedzisira asi kwete kwete zvishoma Romelu Lukaku uyo anoratidza kuve chimiro chakakwana che "hyperpolyglot sezvo iye asingatauri asingasviki mitauro masere. Ivo vanosanganisira French, Lingala, Dutch, Belgium, Kongo, Swahili, Spanish, Chirungu, Portuguese uye German.
Romelu Lukaku, Henrikh Mkhitaryan naPeter Cech vanonakidza polyglots munhabvu. Mifananidzo Credits: LB.
Nei Untold Biography Chokwadi - Vanotamba Nhabvu Navarairidzi Vakawana Dhigirii redzidzo yepamusoro
Maitiro ayo vamwe vafambi venhabvu vanozviona, kutora chikamu mubhola hakurambidzi kuwanikwa kwenzvimbo dzakakwirira dzedzidzo, pfungwa yakanaka inovaona vachienda kunonyoresa kukoreji uye vanopedza kudzidza zvirongwa zvavo.
Italian mutambi Giorgio Chiellini inonyora rondedzero yekupedza kudzidza kubva kuYunivhesiti yeTurin neTenzi Dhigiri muBhizinesi reKutengesa. Nekuti Juan Mata, kuva nemadhigirii maviri - imwe mukushambadzira uye imwe musainzi yemitambo - haina kukwana chete. Iye anofarira mukufunda Psychology panguva yekunyora.
Mune mamaneja ekisheni, unozviziva here izvozvo Frank Lampard ane degree muchiLatin apo Vincent Kompany ane masters degree mubhizinesi manejimendi kubva kuAlchester Manchester Bhizinesi Chikoro? Chokwadi vatambi venhabvu vanogona kunge vasina mukurumbira wehungwaru, asi vatambi vambotaurwa nevamaneja vakabatsira zvakanyanya mukushandura rondedzero.
Brains ine tarenda. Kubva kuna LR Giorgio Chiellini, Vincent Kompany, Frank Lampard naJuan Mata, Image Credits: LB.
Nei Untold Biography Chokwadi - Vapfumi Varidzi Vekirabhu
Chirungu chePremier League chazova nzvimbo yekutamba yemabhirionari anotenga makirabhu uye Splash mari kuruboshwe, kurudyi uye pakati. Pakusvika kuEurope kunetseka, muridzi wechikamu akapfuma seke panguva yekunyora ndiye Sheikh Monsour, murume akatenga Man guta.
Sangana naSheikh Monsour- Iye murombo wekirabhu muEngland. Kiredhiti muchengeti & Inind
Asides kuve muridzi wekirabhu, Sheikh zvakare ndimambo weEmirati anova mutevedzeri wegurukota remubatanidzwa weUnited Arab Emirates, gurukota rezvemitemo uye nhengo yemhuri yeumambo ya Abu Dhabi. Ndiye mukoma wehafu yeMutungamiri weUAE, Khalifa bin Zayed Al Nahyan.
Mushure memurume akapfuma mubhora anouya naJoseph Joe Lewis isiri yemukurumbira weBritishionaire uyo ari muridzi weSpurs.
Joe Lewis (kuruboshwe), muridzi weSpurs ndiye mumwe wevapfumi varume muUK
Iwe iwe mush wanzwa nezvaDanial Levy, asi Joe Lewis ndiye murume ari kumashure kweSpurs uye ndiye akagadza Levy sachigaro wekirabhu.
Chekupedzisira ndeche Roman Abramovich, ndiani anonyanya kuzivikanwa kunze kweRussia semuridzi weChelsea FC Iye ari nharo murume akashandura Chelsea kubva kuPremier League side kuva hofori yeEuropean.
Kune vazhinji vateveri veChelsea vese muEngland nepasi rese, Abramovich kwaratidza kuti zvinoita kuti utenge mufaro.
CHOKWADI CHINOGONA: Tinokutendai nekuverenga yedu Nei Untold Biography Chokwadi. At LifeBogger, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukawana chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka, ndokumbirawo ugovane nesu nekupindura pazasi. Tichagara tichikoshesa nekuremekedza mazano ako.